New World Office Chair | Buy online | SHOP.COM.MM
New World Office Chair
ထိုင်ရတာ သက်တောင့်သက်သာ ရှိပြီး လိုသလိုလည်း အနိမ့်အမြင့် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
43 x 48 x H51cm
New World ရုံးသုံး စုံလည်ကုလားထိုင်
ထိုင်ရတာ အရမ်းသက်တောင့်သက်သာဖြစ်တဲ့အပြင် ကျောဖက်မှာဇကာပေါက်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ ချွေးထွက်ပြီးပြန်ခြောက်သွားတဲ့အခါဖြစ်တတ်တဲ့ အဆုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေကို မဖြစ်စေတော့ဘူးလေ။ အနောက်မှာလဲ ချွေးကွတ်ကြီးမဖြစ်စေတော့ ရုံးအပြန်အလှမပျက်ရတော့ဘူးပေါ့။ အရမ်းကြိုတ်ပါတယ် Read more Hide
This office essential hasaform-comforting mesh feature, which offers perfect lumbar support without external devices or manual adjustments. Giving your home officeasleek, professional look, this ergonomic office chair is made withametal base, with nylon armrests foracomfortable finish. Complete with castors that ensure easy mobility